Jason Rothenberg – Creator – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The 100 (2014) Season5Unicode Season4အပြီးမှာ Nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေပြိုကျပီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး လူမနေနိုင်အောင် Clean ဖြစ်ခဲ့ပီး ၆နှစ်ကြာတဲ့ အခါမှာမှ ဇာတ်လမ်းစထားပါတယ်။ အာကာသပေါ်ရောက်ရှိသွားတဲ့ လူတစ်စုရယ် ကလုတ်တွင်းတဲ့ ပုံးအောင်းနေတဲ့ လူတွေရယ် နောက်ထပ် ရောက်ရှိလာတဲ့ စစ်တပ်ဆန်ဆန် လူတစ်စုရယ် သူတို့သုံးဖွဲ့သားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ . . . ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Season4အၿပီးမွာ Nuclear ဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြၿပိဳက်ပီး ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံး လူမေနႏိုင္ေအာင္ Clean ျဖစ္ခဲ့ပီး ၆ႏွစ္ၾကာတဲ့ အခါမွာမွ ဇာတ္လမ္းစထားပါတယ္။ အာကာသေပၚေရာက္ရွိသြားတဲ့ လူတစ္စုရယ္ ကလုတ္တြင္းတဲ့ ပုံးေအာင္းေနတဲ့ လူေတြရယ္ ေနာက္ထပ္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ စစ္တပ္ဆန္ဆန္ လူတစ္စုရယ္ သူတို႔သုံးဖြဲ႕သားဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာေတာ့ . . . ဒီ Series ကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Van ျဖစ္ပါတယ္ Quality - Blu-ray 1080p Episode ...
TMDb: 7.8/10 4963 votes
The 100 (2014) Season 5
The 100 (2014) Season4Complete Unicode Season3အဆုံးမှာ အယ်လီကို အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပေမဲ့ ၆လအတွင်းကမ္ဘာပျက်စီးတော့မှာ သိနေတဲ့ ကလက်တစ်ယောက် ဘာတွေထပ်ရင်ဆိုင်ရမလဲ ? လူမျိုးစုအားပြိုင်မူ့တွေကကော ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ? The 100 ရဲ့ထုံးစဲအတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Blu-ray 1080p Quality နဲ့အပြည့်အ၀ခံစားကြည့်ပါအုံး Zawgyi Season3အဆုံးမွာ အယ္လီကို အႏိုင္ယူလိုက္ႏိုင္ေပမဲ့ ၆လအတြင္းကမာၻပ်က္စီးေတာ့မွာ သိေနတဲ့ ကလက္တစ္ေယာက္ ဘာေတြထပ္ရင္ဆိုင္ရမလဲ ? လူမ်ိဳးစုအားၿပိဳင္မူ႔ေတြကေကာ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ ? The 100 ရဲ႕ထုံးစဲအတိုင္းစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို Blu-ray 1080p Quality နဲ႔အျပည့္အ၀ခံစားၾကည့္ပါအုံး Quality - Blu-ray 1080p Episode 1 YuuDrive , SharePw , Storage M-Sub, Server M-File Episode2YuuDrive , SharePw , Storage M-Sub, Server M-File Episode ...
The 100 (2014) Season3Complete Unicode Season2မှာ မောင့်ဝယ်သာက လူအကုန်လုံးကို သတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကလက်တစ်ယောက် ရွာပြင်မှာပဲနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ကို မျိုးနွယ်စုတွေက အလိုရှိပီးဖမ်းဆီးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါ . . . Earth မှာအုပ်ချုပ်ရေးမူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီယိုနစ်တစ်ယောက် အလင်းမြို့တော်ကိုရှာတွေ့ပီး သူ့လူတွေပြန်လာကယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါ . . . မျိုးနွယ်စု ၁၂ စု ထဲကို ကောင်းကင်လူသားတွေက ၁၃ ခုမြောက်အဖြစ် ဝင်ဖို့ဖြစ်လာရင်း မမျှော်လင့်ပဲ အခက်အခဲတွေ အာဏာသိမ်းတာတွေ ကြုံရပီး ကောင်းကင်လူသားတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲ ? ကမ္ဘာသားတွေကကော ဘယ်လိုပြသာနာရှာအုံးမလဲ ? ရေခဲနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ နန်းလုပွဲတွေကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရမဲ့ Season လေးဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Season2မွာ ေမာင့္ဝယ္သာက လူအကုန္လုံးကို သတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ကလက္တစ္ေယာက္ ႐ြာျပင္မွာပဲေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႔ကို မ်ိဳးႏြယ္စုေတြက အလိုရွိပီးဖမ္းဆီးဖို႔ျဖစ္လာတဲ့ အခါ . . . Earth ...
TMDb: 7.7/10 4241 votes
The 100 (2014) Season3Complete
The 100 (2014) Season2Complete Unicode Blu-ray Quality နဲ့မှ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ The 100 Season2လာပါပြီ။ Season 1 အဆုံးမှာ ကလက်နဲ့ သူကဘော်ဒါတွေကို မောင့်ဝယ်သာက တောင်ပေါ်သားတွေက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ မောင့်ဝယ်သာမှာ စားစရာအစုံအလင်နဲ့ အေးဆေးချမ်းချမ်းရှိနေပါရဲ့နဲ့ ကလက်တစ်ယောက် မယုံမကြည့်ဖြစ်လာပီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ အခါ မောင့်ဝယ်သာ လျို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ? တောင်ပေါ်သားတွေက ကမ္ဘာသားတွေနဲ့ ဘာတွေကွာခြားမလဲ ? အာကာသကနေ ပြန်ရောက်လာမဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ? စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါအုံး Zawgyi Blu-ray Quality နဲ႔မွ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ The 100 Season2လာပါၿပီ။ Season 1 အဆုံးမွာ ကလက္နဲ႔ သူကေဘာ္ဒါေတြကို ေမာင့္ဝယ္သာက ေတာင္ေပၚသားေတြက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။ ေမာင့္ဝယ္သာမွာ စားစရာအစုံအလင္နဲ႔ ေအးေဆးခ်မ္းခ်မ္းရွိေနပါရဲ႕နဲ႔ ကလက္တစ္ေယာက္ မယုံမၾကည့္ျဖစ္လာပီး ...
TMDb: 7.7/10 3963 votes
The 100 (2014) Season 1 Complete Unicode ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကနေ စတင်ပြီး ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီ Series ကတော့ "The 100" ဖြစ်ပါပြီး The CW ကနေပြီးတော့ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ... ကမ္ဘာကြီးဟာ Nuclearတွေကြောင့် ပျက်စီးပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူသားတွေအကုန်လုံး သေဆုံးကုန်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် "The Ark" ဆိုတဲ့ အာကာသယာဉ်ကတော့ လူပေါင်းများစွာနဲ့အတူ အာကာသထဲကို ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ... အဲ့ဒီယာဉ်ပေါ်မှာ ဘယ်ပြစ်မှုမဆို ကျူးလွန်တဲ့သူဟာ သေဒဏ်ပါ ... ဖြစ်ချင်တော့ ကမ္ဘာကြီးပျက်ပြီး ၉၇နှစ်အရောက်မှာ ယာဉ်ပေါ်မှာ လူဦးရေ အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ် ... အဲ့ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ၁၈နှစ်အောက် လူငယ်အယောက်တစ်ရာကို ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို အင်အားသုံးပြီး စေလွှတ်ခဲ့ရာမှ ဒီ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် ... အဲ့ဒီလို လွှတ်လိုက်တာကို တာဝန်ရှိသူတွေပဲ သိပါတယ် ... ...
TMDb: 7.6/10 3600 votes